မျောက်စပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အရှေ့တောင် အာရှ၊ တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့အာရှတွင် တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နှင့် ဆက်စပ်သော ဒေသများတွင် တွေ့ရတတ်သည်။
ရေကူးကျွမ်းကျင်ပြီး မိုင်ဝက်ခန့် ရေကူးနိုင်သည်။ သစ်ကိုင်းများ ပေါ်တွင် အနေနည်းပြီး မြေပြင်ပေါ်တွင် အနေများသည်။ ၃နှစ်မှ ၄နှစ်တွင် အရွယ်ရောက်သည်။ ၁၃၅ ရက် မှ ၁၄၅ ရက် အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်။ သဘာဝ တောတွင်း သက်တမ်းတွင် ၁၁ နှစ် အထိ နေပြီး တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် ၂၀ နှစ် အထိ နေထိုင်ကြသည်။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)။ Baltimore: Johns Hopkins University Press။ p. 163။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျောက်စပ်&oldid=279046" မှ ရယူရန်
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅၊ ၁၀:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅၊ ၁၀:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။